बिष्णु माझी र नेत्र कडेँलको आवाजमा आएको ‘पिरतीले रुवाउछ’मा रन्जिता गुरुङको बिहे ! – Complete Nepali News Portal
बिष्णु माझी र नेत्र कडेँलको आवाजमा आएको ‘पिरतीले रुवाउछ’मा रन्जिता गुरुङको बिहे !
Kamal Sargam March 31, 2019
महालक्ष्मी म्युजिक प्रालीको गायिका विष्णु माझी र गायक नेत्र कडेँलको मार्मिक आवाजमा जिवन भोगाईमा आधारित लोक कोशेली ”पिरतीले रुवाउँछ ” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गीतमा शब्द सिर्जना सुनिल केसी गणेश अधिकारी को लय सिर्जना रहेको छ । प्रेमको अभावमा भौतारिएका प्रेमी प्रेमिकाको पिडालाई गीतमा समावेश गरिएको छ । मायामा पिरतीले रुहाउछ भन्ने जानकारी भएकाले पिडा भुल्नको लागी गीतमा प्रेमीकाले प्रेमीलाई आग्रंह गरेकी छन ।
अजय रेग्मीको छायाँकन , विनोद बमको सम्पादन , काजिश श्रेष्ठको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । ”पिरतीले रुवाँउछ ” गीतको भिडियोमा रंजिता गुरुङ र संगीत शर्माको निकै मन छुने अभिनय रहेको छ ।
”पिरतीले रुवाँउछ ” हेर्नुहोस भिडियो ।